Lalao Ravalomanana Ho any Canada
Hihazo an’i Montréal Canada anio, ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana, hamonjy ny kongresin’ny Ben’ny tanàna mivondrona eo anivon’ny fikambanana iraisam-pirenenan’ireo Ben’ny tanàna amin’ny firenena miteny frantsay, izay hotanterahina ny 19-22 jona ho avy izao. Ho eto an-toerana ve ny Ben’ny tanàna amin’ny 26 jona hankalaza ny faha 57 taonan’ny fahaleovantenam- pirenena ?
Totoafo ny fiatrehana fivoriana, fampitomboana traikefa ha mpandrosoana ny tanàna, atrehin’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana. Vao omaly 16 jona tolakandro izao, izy no tafaverina an-tanindrazana rehefa avy niatrika ny fivoriam-be tatsy Pretoria Afrika Atsimo izay niarahana tamin’ireo Ben’ny tanànan’ny renivohitry ny firenena Afrikanina, izay niisa 28 no nandray anjara tamin’ity. Niompana tamin’ny hoe : «Inona no fampandrosoana maharitra atao eto an-drenivohitra» ny vontoatin’ny fivoriana. Nisy tetikasa 12 no nodinihina tao amin’ny fivoriana, hoy ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, ary anisan’ny nandraisany anjara ny resaka fambolena an-drenivohitra. Noresahan’ny Ben’ny tanàna ihany koa ny mikasika ny fitaterana, ny fahasalamana sy ireo rehetra misy eny amin’ny tanàn-dehibe. Hitohy any Montréal any Canada ny fivoriana. Azo antenaina, hoy ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra, indrindra amin’ny Afrika Atsimo, ka ny Ben’ny tanànan’i Tshwane, Atoa Solly Tshepiso Msimanga, dia vonona hifandray amintsika ary hifampizara ireo traikefa ananany izay hita fa mahomby.